ओमिक्रोन वा मौसमी फ्लू कसरी छुट्याउने ? - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ जनस्वास्थ्य ∕ ओमिक्रोन वा मौसमी फ्लू कसरी छुट्याउने ?
डी. आर. बन्जाडे शुक्रबार, २०७८ माघ १४ गते, १३:४० मा प्रकाशित
जाडोयाम पनि बढिरहेको अवस्थामा बिरामीहरुमा देखिरहेको रुघाखोकी र ज्वरो सिजनल हो वा कोभिडको नयाँ भेरियन्टका रुप भन्ने विषयमा व्यपाक चर्चामा रहेको देखिन्छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलका कोरोना फोकल पर्सन डा. नन्दु पाठकसँग हेल्थ आवाजका लागि डी आर बन्जाडेले गरेको कुराकानी:
१) पछिल्लो समय जुन संक्रमण देखिएको छ, बिरामीहरु पनि बढी रहेका छन् । यो सिजनल हो वा कोभिडको नयाँ भेरियन्टका रुपमा चर्चामा रहेको ओमिक्रोन हो ?
-अहिले सिजनल फ्लूको पनि सिजन भएको हुँदा फूलुका विरामी पनि हुनुहुन्छ । र कोभिड कै नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनका बिरामी पनि हुनुहुन्छ । समग्रमा दुवै खाले बिरामी हामी कहाँ आउने गुर्नभएको छ । दुबै खाले बिरामी लगभग बराबरीको अवस्थामा हुनुहुन्छ ।
२) ओमिक्रोन हो वा सिजनल फ्लू भनेर बिरामीले वा बिरामीको आफन्तले कसरी छुट्टाउने ? लक्षणका आधारमा छुट्टाउन सकिने अवस्था हुन्छ ?
–सुरुवाती लक्षण चाहि दुबैमा एउटै खालको हुन्छ । जिउ दुख्ने, ज्वरो आउने, रुघा लाग्ने, घाँटी दुख्ने । तर, घाँटी दुख्ने समस्या र जिउ दुख्ने समस्या चाहि ओमिक्रोनमा अलि बढी हुन्छ । घाँटी दुख्ने, जिउ दुख्ने र ढाड दुख्ने समस्या ओमिक्रोनमा बढी हुने गर्दछ । यी तीनवटा समस्या बढी देखिन्छ । अर्को कुरा ओमिक्रोनको परिवारमा फैलने क्रम फ्लुको भन्दा अलि बढी नै हुन्छ । केही दिन पछि ओमिक्रोनका बिरामीहरुलाई श्वास फेर्न गाह्रो हुने, खोक्दा पहेलो खफ आउने र खोकीमा रगत देखिने जस्ता समस्या देखिन्छन् । भने, फ्लुमा तीनदिनसम्म लक्षण बढ्दै जान्छ । जस्तो की रुघाखाकी, ज्वरो नाकबाट पानी बग्ने जस्ता लक्षणहरु तीनदिन पछि घट्दै जान्छ । यी लक्षणको प्रकृति हेरेर पनि ओमिक्रोन हो वा सिजनल फ्लु हो भनेर छुट्टाउन सकिन्छ ।
३) सिजनल फ्लुको संक्रमणदर कम तर ओमिक्रोनको अत्याधिक संक्रामक छ भन्न सकिन्छ ?
–हो, ओमिक्रोन संक्रामक छ । यसको संक्रमण हुने दर बढी छ । सिजनल फ्लुको कम छ । सुरुवाती लक्षण दुबैमा एउटै जस्तो देखिए पनि केही दिन पछि लक्षण फरक हुँदै जान्छ । ओमिक्रोनमा घाँटी दुख्ने र शरीर दुख्ने र ज्वरो आउने समस्या बढी हुन्छ ।
४) ओमिक्रोन संक्रमक बढी नै भए पनि घातक कम छ भन्ने गरी चर्चा भैरहेको पाइन्छ । खास अवस्था के हो ?
यसमा म्युटेशन भाइरसमा हुँदै डेल्टा हुँदै ओमिक्रोन भएको हो । विभिन्न भेरियन्ट हुँदै भाइरसको स्वरुप परिवर्तन भएर ओमिक्रोन देखिएकोे हो । ओमिक्रोनको यति धेरै म्यूटेशन भयो की संक्रामक क्षमता धेरै भयो तर, शरीरमा असर पार्ने क्षमता भने कम देखियो । अरु भेरियन्टमा जुन प्रकारको असर देखिने गर्दथ्यो, अक्सिजनको कमी हुने, निमोनिया हुने, यसमा त्यस्तो देखिएको छैन ।
सामान्यतया पाँच दिनमा निको हुने देखिएको छ । तर, जुन व्यक्तिले भ्याक्सिन लगाएको छैन, उनीहरुलाई भने ओमिक्रोन पनि अन्य भेरियन्ट जस्तै घातक देखिएको छ । जस्तोकी जेष्ठ नागरिक, दीर्ग रोगी, क्यान्सरको औषधी सेवन गरिरहेका, किड्नीको समस्या भएका तथा अङ्ग प्रत्यारोपण गरेकाहरुका लागि भने यो घातक मानिएको छ र देखिएको पनि छ ।
५) पूरा मात्रा खोप लगाएकाहरुका लागि बुस्टर डोज लगाउनु पर्छ भनिएको छ । बुस्टर डोज नलगाएका तर पुरा मात्रा खोप लगाएकाहरुलाई ओमिक्रोन भेरियन्ट कत्तिको असरदार हुन्छ ?
– खोप लगाइसेकाहरुको पनि बुस्टर डोज नलागाए पनि एन्टिवडी त शरीरमा छ । तर एन्टिवडीको मात्रा क्रमशः घट्दै जाने हो । एकै पटक निल भएर जाने त होइन । बुस्टर डोज हामी भर्खर त सुरु गरेका छौँ तर ओमिक्रोन आएको त धेरै भैसक्यो । तर, भ्याक्सिन लगाएकाहरुलाई अहिले सम्म भर्ना गरेता पनि अक्सिजन दिनु पर्ने, भ्यान्टिलेरमा राख्नु परेको देखिएको छैन् । त्यसले गर्दा पहिले लगाएको भ्याकसिनले राम्रो काम गरेको देखिएको छ ।
६) बुस्टर डोज लगाउनका लागि दोस्रो मात्रा लगाए पछि कति समय उपयुक्त हुन्छ ?
बुस्टर डोज लगाउन ४ देखि ६ महिनाको समय उपयुक्त हुन्छ । पछिल्लो समयको अध्ययनले ६ देखि ९ महिनामा क्रमश: एन्टिबढी घट्दै जाने हुनाले छ महिना पछि लगाउनुपर्छ भन्ने गरी काम सुरु भएको छ । ४ महिनाको अवधि सम्म अघिल्लो खोपले नै एन्टिबढी तयार गर्ने हुनाले अर्को डोज दिइरहुन पर्ने हुँदैन, भन्ने हो । जब एन्टिबढी कम हुँदै जान्छ तव बुस्टर डोज दिँदा राम्रो हुन्छ ।
७) ओमिक्रोन हो, भन्ने पुष्टी भए पछि संक्रमितले के-के गर्नुपछ ? के कस्ता सावधानीहरु अपनाउनु पर्ला ?
–ओमिक्रोन नै हो भन्ने पुष्टी नै गर्न त गाह्रो छ । तर, कोभिड पुष्टी भयो भने स्वास्थ्य मापदण्डका पालनाहरु अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्छ । तागतिला खानेकुराहरु खाने, भेन्टिलेटेड कोठामा बस्ने, आइसोलेट हुने जस्ता कुराहरु पालना गर्नुपर्छ । नियमित व्यायम गर्ने, अरुलाई नसरोस् भनेर ध्यान पुर्याउने गर्नुपर्छ । सरकारले जुन कोभिड प्रोटोकल अनुसार गर्नु पर्ने व्यवहार सार्वजनिक गरेको छ ती सबै कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ ।
क्याटेगोरी : जनस्वास्थ्य, लुम्बिनी प्रदेश